Xog: Maxaa kasoo baxay kulankii Mursal iyo Cabdi Xaashi? - Caasimada Online
Home Warar Xog: Maxaa kasoo baxay kulankii Mursal iyo Cabdi Xaashi?
Xog: Maxaa kasoo baxay kulankii Mursal iyo Cabdi Xaashi?
Muqdisho (Caasimada Online) – Kulan dhex maray Gudoomiyaasha Golaha Aqalka sare iyo Golaha Shacabka waxa ay kaga hadlayeen sidii loo saldhigi lahaa Guuxa siyaasadeed ka dhex jiray Guddoonka Golaha.
Gudoomiyaha Aqalka sare Cabdi Xaashi Cabdullaahi oo tagay Hoyga Gudoomiye Mursal waxa uu u jeediyay in wax waliba loo maro Dastuurka Dalka iyo Xeer hoosaadka Golaha Shacabka u yaalla.
Kulanka oo warbaahinta dibad joog ka ahayd, waxa ay illo wareedyo ku dhow ay Caasimada Online u sheegeen in Mursal iyo Cabdi Xaashi ay kawada hadleen sida Xal looga gaari karo Khilaafka.
Inkasta oo aan jirin war kasoo baxay Labada Gudoomiye ee Kulmay, wararka la helayo ayaa sheegaya in ay ku ballameen fadhi kale, Golaha Aqalka sare-na ay dhex geli doonaan si loo damiyo Xiisadda Siyaasadeed.
Golaha Aqalka sare waxaa horyaalla xal ka gaarista Khilaafka u dhaxeeya Dowladda Federaalka iyo Maamul Goboleedyada, ergo Golaha ka socotane ay la kulmeen Madaxda Dowlad Goboleedyada si loo dhameeyo Khilaafka.
Labadii Cishe ee lasoo dhaafay Guuxa Siyaasadeed ee Golaha shacabka ka dhex jiray ayaa cirka isku sii shareerayay, kadib markii Muranka uu bannaanka yimid, Xildhibaano katirsan Golaha Shacabkane ay gudbiyeen Mooshin ka dhan ah Madaxweynaha.
Gudoomiye ku xigeenada 1-aad iyo 2-aad ee Golaha Shacabka ayaa kahor yimid qabashada Mooshinka ee Gudoomiye Mursal, iyaga oo sheegay in aan sahlaneen Mooshinka Madaxweynaha iyo Xasaanad ka qaadista Xildhibaanada, sidoo kalena aan jirn Maxkamadda Dastuuriga si ay u gasho.
Xoghayaha guud ee Golaha Shacabka Cabdikariin Xaaji Cabdi Buux ayaa warqad uu soo saaray maanta ku sheegay in uu Mooshinka uu jabay, kadib markii 14-Mudane ay sheegeen in Magacyadooda lagu darsaday liiska iyaguna aan raalli ka ahayn, sidaasne ay Xildhibaanada ku noqdeen 78.
Sida uu dhigayo dastuurka dalka Golaha Shacabka waxaa mooshinka Madaxeynaha gudbin karta saddex meelood Meel (1/3) oo u dhiganta 92-Xubnood, Maadaama Xildhibaanada ay yihiin 275-Xildhibaan.